Sida loo sameeyo flash-ka oo ka yeeraya iPhone markay wacayso | Wararka IPhone
Paul Aparicio | | Wararka IPhone, Casharrada iyo buugaagta
Waxaa jira aalado badan oo, marka lagu daro digniinta austustic iyo gariirka, sidoo kale ay ku jiraan digniin muuqaal ah. Digniinta muuqaalka ah badanaa waa Laydh ka digaya inay iyagu yihiin ama inay na soo waceen. Qaar ka mid ah aaladahaan sidoo kale waxay leeyihiin Laydh soo saara iftiin midab kale duwan iyadoo ku xiran codsigii nala soo socodsiiyay, sida cagaarka WhatsApp, buluuga Skype, ama oranjiga wicitaan la seegay. Xilligan la joogo ma jiro iPhone leh leydh sidan oo kale ah, laakiin waan samayn karnaa flash ayaa daaran marka ogeysiiska soo galo.
Haddii aan daacad u ahaado, in tooshku daaran yahay inta ay na soo wacayaan uma muuqdo mid waxtar badan leh haddii aanaan dhibaato ka qabin maqalka, maadaama, xaaladaha caadiga ah, mar kasta oo aan iPhone ku dhow nahay aan maqli doonno digniin ama ogeysiis gariirka, Laakiin waxaa jiri kara xaalado ay xiiso yeelan karto, tusaale ahaan, haddii aan taleefanka uga tagno miiska inta aan xafladda ku jirno ee muusigga cod weyni socdo. Dabcan, haa way ahaan doontaa waxtar u leh maqalka naafada ah.
1 Sida loogu beddelo flash-ka iPhone wargelinta LED-ka
2 Apple miyey soo saari doontaa iPhone leh LED ogeysiisyada?
Sida loogu beddelo flash-ka iPhone wargelinta LED-ka
Waxaan fureynaa dejinta iPhone-ka.
Waxaan galnaa qaybta Guud.
Marka xigta waxaan raadineynaa oo marin u helnaa Helitaanka.
Ugu dambeyntiina, hoos ayaannu u soo foorareynaa, qeybta AUDITION-ka, waxaan dhaqaajineynaa shidhka oranaya Toosinta digniinta LED-ka.
Way cadahay inay buuxineyso shaqada waqtiga aan helno ogeysiinta, laakiin maahan nidaam dhameystiran. Waxaan dhihi lahaa waxay ka maqan tahay laba shay inay noqdaan:
Ogeysiiska lama soo celiyo. Tan macnaheedu waxa weeye inay kufiican tahay uun daqiiqadda ay dhawaaqeyso. Waa macquul haddii aan tixgelinno in nidaamka Apple ay ku dartay loogu talagalay dadka qaba dhibaatooyinka maqalka. Waxaan dhihi karnaa "Oo muxuu u sii ilaalin laydhka si looga digo inay jirto ogeysiis sugaya?", Kaas oo leh jawaab aad u fudud: iPhone ma haysto la socod ogeysiis ah, hore ayaan u ogaanay tan, laakiin waxay u isticmaasho sidii sida waa flash-ka sawirka. Nalalka kamaradaha ayaa loogu talagalay inay iftiimiyaan muuqaalka oo ay u ekaadaan kuwo wanaagsan. Nalalkaani waxay cunaan tamar badan, markaa haddii aan helno ogeysiis, tooshku wuu dhalaalayaa mana nihin kuwo ka horreeya joojinta, waxay u badan tahay markii, markaan ogaano, inuu batteriga in badan hoos u dhacay. Iyada oo is-maamulku yahay mid ka mid ah dhibaatooyinka taleefannada casriga ah ee la taabto, tani uma muuqato fikradda ugu fiican.
Kaliya ogeysii hal midab. In kasta oo ay iPhone adeegsato Flash Tone flash oo soo saari kara iftiin leh midabbo kala duwan oo heer kul ah kana socda iPhone 5s, ogeysiisyada flash-ku had iyo jeer way cad yihiin. Haddii qof maqalka naafada ka ah uu arko taleefankooda iPhone-ka ah wuxuu uga digayaa "wax" nal leh, qofkani ma sheegi karo illaa uu ka ag dhowaado oo uu arko shaashadda in ogeysiiska uu yahay mid lagu sheegayo Twitter, WhatsApp ama digniin.
Apple miyey soo saari doontaa iPhone leh LED ogeysiisyada?
Haddii aan daacad ahaado, waan ka shakisanahay. Waa run in nuucyada noocan ah ee loo yaqaan 'LEDs' aysan qaadanaynin meelo badan oo meelkasta lagu dari karo, laakiin su'aashu waxay tahay Xagee dhigayaan? Markaad eegto iPhone 6s-ka cad ee hore, qalabku wuxuu horeyba u leeyahay seddex god oo kore: midka loogu talagalay af-hayeenka, mid kamaradda iyo midka iftiinka dareeraha. Uma muuqato inay aad ugu dhowdahay in Apple uu go'aansan doono inuu ku daro dalool afaraad, ama uusan ku darin ogeysiis uu hogaaminayo.
Intaa waxaa sii dheer, shirkadaha tiknoolajiyada waxay ku dadaalayaan inay xirxiraan qaybo badan oo suurtagal ah raadadka ugu yar. Waxaa la sheegay in mid ka mid ah sababaha ay iPhone 7 Ma lahaan doono jaakad dhan 3.5mm, waa si qalabku uga khafiifsan yahay iPhone 6 oo durbaba aad u dhuuban. Sida muuqata, ogeysiiska LED-ku waa qeyb ka mid ah qalabkaas Apple ay diideyso aaladda si ay u ilaaliso naqshadeynta iyadoon la dulsaarin.
Waxa hubaal ah inaan arki doonno mustaqbalka waa a siyaada ah oo u hogaansan sida LED ogeysiisyada. Horey waxaa ujiray mashaariic badan oo Kickstarter ah oo soo bandhigay kiisas nuucaan ah, sida Lunacase oo aad kuhesho muuqaalkii hore oo nooga digaya inay na soo wacayaan ayna isticmaalaan tamarta ka soo baxda iPhone-ka. Si kale haddii loo dhigo, waxay ka faa'iideysaneysaa tamarta ku hareeraysan qalabka si ay u soo saarto iftiinka digniinta.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, inkasta oo ay fiicnaan laheyd inaan arko ogeysiisyada sugaya ee midabbada kala duwan leh, waxaan sidoo kale fahansanahay in Apple ay mudnaanta siineyso waxyaabo kale, sida kamaradda laba-lens ah oo la filayo inay ka timaado gacanta iPhone 7 ama shaashadda AMOLED taas oo, sida ay sheegayaan wararka xanta ah, ay imaaneyso sanadka 2018 iyadoo ay suuragal tahay in aan ku arki doono iPhone 7s. Miyaad seegtay ogeysiiska LED-ka ee iPhone-ka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Sida loo sameeyo flash blink on iPhone markaad isoo wacayso
Fabiola wuu kacay dijo
Sideen u iftiimi karaa markuu i soo waco muxuu ugu egyahay sidan ma ahan sidaan u haysto iphone 6
Jawaab Fabiola Rosa
Waad salaaman tihiin saaxiib, waad awoodaa
Jawaab MIRIAM SANTOS LOPEZ
Waxaan hayaa iphone 6s oo lagu daray iyo hadii hogaaminta ogeysiiska ay shaqeysay laakiin waxaan horey u haystay maalmo badan oo aysan aheyn ... horey ayaan u soo celiyey oo aan cusbooneysiiyay noocii ugu dambeeyay iyo waxba. I caawi!!
Isla waxbaa igu dhaca, ma xallin kartaa?
Ku jawaab Artuto
Sideen ugu hawlgelin karaa tooshka taleefanka 7
Aad baan kuugu mahadsanaa
WAAN LEEYAHAY 6BILAASH OO AANAN SAMAYN KARIN. MA I HELI KARTAA FADLAN !!
WAQTIGIINA WAAN RAACAY TALLAABADA SARE. MAHADSANID!
Jawaab DANIELA JUSTO
Wuxuu qaatay caawimaad sida uu isagu u xidhayay si taleefanka gacanta ee iPhone 8plus uu u daarto tooshka markay i soo wacaan ama markay farriin diraan, i caawi.
Ku jawaab Yeraldin
Canadian DJ Deadmau 5 ayaa ku biirtay Beats 1